Barnaamijka Iskaashatada Gaarka ah ee CERB ee Waajibka ah - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Guddiga Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada (CERB)|Barnaamijka CERB ee La Wadaago Barnaamijka Iskaashatada Gaarka ah
Barnaamijka CERB ee La Wadaago Barnaamijka Iskaashatada Gaarka ah
Dulmarka Guud ee Barnaamijka Iskaashatada Gaarka ah
Deymaha iyo deeqaha dhismaha kaabayaasha dadweynaha ee lagama maarmaanka u ah ballaarinta ganacsiga gaarka loo leeyahay. Barnaamijka Wadajirka ah ee Iskaashatada Gaarka ah (CPP) wuxuu u baahan yahay ballanqaad ganacsi oo gaar loo leeyahay oo qayb ka ah arjiga.
Shuruudaha waxaa ka mid ah:
• Caddeymo muujinaya in horumar gaar ah ama ballaarin ay diyaar u tahay inay dhacdo iyo in horumarka gaarka loo leeyahay uu ku xirmayo oggolaanshaha lacagaha CERB.
• Mashruucu waa inuu noqdaa midkood abuuro tiro badan oo shaqooyin joogto ah iyo / ama abuuro maalgashi raasumaal oo gaar loo leeyahay.
• Mushaharka dhexdhexaadka ah ee saacadaha shaqooyinka shirkadaha gaarka loo leeyahay la abuuray, ka dib marka mashruuca la dhammeeyo, waa inuu ka bato kan hadda mushaharka dhexdhexaadka ee gobolka oo dhan.
Codsadeyaashu waa inay sidoo kale muujiyaan baahida loo qabo kaalmada CERB iyo inaan la helin ilo kale oo dhaqaale oo waqtigiisa ku habboon.
Qorshaynta, helitaanka, dhismaha, dayactirka, dib u dhiska, bedelka, dhaqan celinta, ama hagaajinta nidaamyada u qalma:
• Buundooyinka / Jidadka / Gaadiidka
• Dhismayaal ama Dhismayaal
• Biyaha Gudaha iyo Warshadaha
• Xasilinta Dhulka
• Korantada / Gaaska Dabiiciga ah
• Dhismayaasha Dekedda
• Bullaacad nadaafadeed
• Cilmi baarista, tijaabinta, tababarka, iyo xarumaha fiditaanka meelaha loo qoondeeyey Aagagga Iskaashiga Innovation (IPZs) ee lagu oggolaaday nidaamka RCW 4.330.270.
Hawlaha Aan U Qalmin
CERB ma maalgelin karto mashaariicda kuwaas oo:
• Natiijada horumarinta tafaariiqda
• Fududee khamaarka
• Ka wareejinta shaqooyinka gobol ka mid ah gobol kale
• Aad ka baxsan tahay sharciga codsadaha
Awoodaha u Qalma
• Magaalooyinka iyo Magaalooyinka
• Qabiilooyinka Hindiya ee Federaalku Aqoonsado
• Shirkadaha Dawladda Hoose
• Shirkadaha Quasi-Municipal
• Degmooyinka Dekedda Dadweynaha
• Degmooyinka Ujeeddada Gaarka ah
CERB waxay bixisaa amaahyo $ 3 milyan ugu badnaan mashruuc kasta. Deeqaha waxaa la heli karaa illaa 25% ee wadarta abaalmarinta, oo lagu go'aamiyay nidaamka hoos-u-dhigista iyo saamiga caymiska adeegga deynta (DSCR). Codsadeyaashu waa inay bixiyaan lacag u dhiganta 20% ee wadarta kharashka mashruuca.
Heerarka dulsaarka: 1-3%
Muddada: Ilaa 20 sano
Codsiyada dhammaan barnaamijyada maalgelinta CERB waxaa loo tixgeliyaa si joogto ah. Guddigu wuxuu kulmaa labadii biloodba mar si loo tixgeliyo mashaariicda loona gaaro go'aannada maaliyadeed.
Taariikhda Codsiga 2021-2023 (PDF)
Liiska Hubinta ee Xaddiga Barnaamijka Iskaashatada Gaarka ah
Kahor gudbinta arjiga, fadlan daabac oo buuxi
Liiska Hubinta ee Xirmooyinka Iskaashatada Gaarka ah. Tani waxay gacan ka geysan doontaa hubinta in arjiga la soo gudbiyay la dhammaystiro.
Foomka Codsiga Muunadda
Si aad u aragto sida arjiga dhabta ahi u egyahay, soo dejiso
ZoomGrants Waxay Go'aansatay Guudmarka Codsiga Iskaashatada Gaarka ah (PDF)
Caawinta Codsiga ZoomGrants
ZoomGrants Codsiga Macluumaadka iyo Tabaha (PDF)
2021-23 Xeerarka Barnaamijka CERB (PDF)
Kheyraad Dheeraad ah oo ku Saabsan dhameystirka dalabkaaga
Su'aalaha Mushaharka Dhexe (PDF)
Mushaharka Dhexe ee Degmo ahaan (PDF)
Xisaabinta Mushaarka Mediya (xls)
Tartanka CALCULATOR (xls)
Amarka Gudoomiyaha ee Fulinta 05-05 (Websaydh)
Qabiilooyinka ay Dowladu Aqoonsato ee Gobolka Washington (Websaydh)
Foomka EZ-1 (PDF)
Tilmaamaha Warbixinta Kheyraadka Dhaqanka ee DAHP (PDF)
Shaqaalaynta La Taliyaha Ilaalinta (Websaydh)
Ma leedahay mashruuc?
Codsadeyaasha suurtogalka ah waa inay la xiriiraan shaqaalaha si ay ugala hadlaan mashruucooda, kahor intaanay helin iskuxirka arjiga khadka tooska ah.